कतै घट्यो, कतै बढ्यो पाटे बाघको सङ्ख्या ! - कतै घट्यो, कतै बढ्यो पाटे बाघको सङ्ख्या !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ७ आश्विन, 05:04:03 PM
चितवन । मुख्य बासस्थान मानिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । सन् २०१३ मा १२० बयस्क बाघ रहेको निकुञ्जमा सन् २०१८ को गणनामा ९३ मा झरेको छ । जसका कारण सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पु¥याउने लक्ष्यमा बाधा पुग्ने देखिन्छ ।
प्राकृतिक र आहारको हिसाबले निकुञ्ज बाघका लागि उत्तम मानिन्छ । ९५२ दशमलब ६३ वर्गकिलोमिटर निकुञ्ज र ७२९ दशमलब ३७ वर्गकिलोमिटर मध्यवर्ती क्षेत्र बाघको बासस्थान रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका पूर्वप्रमुख बाघविज्ञ डा चिरञ्जीवी पोखरेल क्यामेरा ट्यापिङ प्रविधिबाट गरिएको गणनामा सन् २०१३ मा ७८ तस्वीर कैद भएकामा यस वर्ष तस्वीरको सङ्ख्या भने बढेर ८५ पुगेको बताउँछन ।
औशत गणनामा भने सङ्ख्या घटेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार गत वर्षको बाढीमा बाघ बगाउनु, बाढीका कारण आहारा घटेर बाघ अन्यत्र जानुलगायतका कारण बाघको सङ्ख्या कमी देखिएको हो । यद्यपि समग्रमा नेपालमा भने बाघको सङ्ख्या नघटेको उनको भनाइ छ ।
निकुञ्ज विभागका पर्यावरणविद् डा लक्ष्मण पौडेल निकुञ्जले कति बाघ धान्न सक्छ भनी अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन । उनको भनाइमा यहाँका बाघ बाढीपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्वतर्फ गएको हुन सक्छन् । वाल्मीकि टाइगर रिजर्वमा बाघको सङ्ख्या बढेको पौडेलको भनाइ छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१३ मा सातवटा बाघ रहेकामा अहिले १८ पुगेको छ भने वाल्मीकिमा १७ बाट ३३ पुगेको उहाँले बताउछन । ती दुवै ठाउँमा चितवनका बाघ पुगेको अनुमान पौडेल गर्छन ।
गत पाँच वर्षमा यस निकुञ्जमा १७ बाघ मरेको भन्दै उनी प्रकृतिमा वन्यजन्तु घट्ने र बढ्ने भइरहने हुनाले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन ।
हाल निकुञ्ज विभागका सहसचिव रहनुभएका चितवन निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल समग्रमा चितवनमा बाघ नघटेको दाबी गर्छन ।
गत वर्षको बाढीमा पोथी बाघ बच्चा जोगाउन नदीमा हेलिँदा बाढीले बगाएको अनुमान उनी गर्छन । स्वयं आफूले बाढीमा बाघ बगाएको देखेको बताउँदै उनले कति बच्चा र आमालाई बगायो भन्ने यकिन हुन भने नसकेको बताए ।
उनले छिमेकी निकुञ्जमा बाघ गएको बताउनुभयो । बाढीले आहाराजन्य जनावर पनि बगाएको भन्दै उनले बासस्थान विनाश हुँदा बाघ अन्यत्र सरेको बताउँछन ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकाल नियमितरुपमा बाघ बस्ती छिर्ने गरेको, निकुञ्जमा हिँड्दा पर्यटक र संरक्षणकर्मीले सजिलै बाघ देख्ने गरेको, तस्करी नभएको, निकुञ्ज र मानवका बीचमा द्वन्द्व घटेको बताउँछन ।
प्राविधिकरुपमा सङ्ख्या कम देखिए पनि निकुञ्जमा बाघको उपस्थिति बाक्लो रहेको उहाँको दाबी छ ।
संरक्षणमा गरिएका कार्य अरु बढाएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यवर्तीका बासिन्दाको समेत संरक्षणमा चासो र चिन्ता बढेको भन्दै उहाँले सन् २०२२ सम्म सङ्ख्या दोब्बर बनाउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेरै छाड्ने दाबी गरे ।
निकुञ्जमा सन् १९९६ मा ५० वटा, १९९९ मा ५० वटा, २००३ मा ६० वटा, २००५ मा ६५ वटा र २०१३ मा १२० वटा बाघ रहेका थिए । गत २२ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक बाघको सङ्ख्या घटेको हो ।
बाघको मुख्य आहारा मानिने चित्तल, जरायो, बँदेल, लघुना, रतुवा, गौरीगाई, निलगाई, लङ्गुरजस्ता जनावर निकुञ्जमा पाइन्छन् । बाघको सङ्ख्या घट्दै जानुलाई संरक्षणकर्मीले चिन्ताका रुपमा लिएका छन् ।
सन् २०१८ को बाघ गणनामा शुक्लाफाँटामा बाघको सङ्ख्या घटेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत गोपाल घिमिरेले जानकारी दिए ।
“यसै वर्ष हामीले निकुञ्जमा एउटा भाले बाघ र दुई बच्चा गरी तीन बाघ मरेको फेला पारेका थियौँ,” निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत घिमिरेले भने, “भाले बाघ आपसमा लडेर मरेको थियो भने बच्चा मृत भेटिएका थिए ।”
भारतको लग्गाभग्गा संरक्षित वनसित जोडिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाघ ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले पनि सङ्ख्या घटेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
“शुक्लाफाँटामा न्यूनतम १५ देखि अधिकतम २१ वटासम्म बाघ छन्,” उनले भने, “बाघको आहारा प्रजातिको घनत्वले पनि शुक्लाफाँटा राम्रै मानिन्छ ।”
सन् २०१० मा शुक्लाफाँटामा बाघको सङ्ख्या १० रहेको थियो । प्रत्येक चार वर्षमा बाघ गणना हुँदै आएको बताउँदै संरक्षण अधिकृत घिमिरेले सन् २०२२ मा नेपालमा बाघको सङ्ख्या २५० पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
“यस वर्ष फोटो पहिचान भएकामध्ये नौवटा भाले र ६ वटापोथी रहेका छन्,” घिमिरेले भने, “निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरी बाघ गणनाका लागि १०९ वटा क्यामेरा जडान गरिएका थिए ।”
पोथीभन्दा भालेको सङ्ख्या वृद्धि हुनु, नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासित जोडिएको हुनु लगायतका कारणले यहाँ सङ्ख्या बढ्न नसकेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
बाघको संरक्षण तथा व्यस्थापन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९९ देखि शुक्लाफाँटामा बाघको अनुगमन तथा गणना गरिँदै आएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने नेपालमै सबैभन्दा बढी बर्दिया ८७ वयस्क पाटेबाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
बर्दियामा आज राष्ट्रिय बाघ गणना संरक्षण दिवसको अवसरमा एक औपचारिक कार्यक्रमबाट वयस्क बाघको सङ्ख्या न्यूनतम ८२ देखि ९७ भएको प्रमुख अशोक भण्डारीले बताउँछन ।
बर्दियामा वस्यक पाटेबाघको सङ्ख्या औसतमा ८७ देखिएको छ । फोटो पहिचान क्यामराबाट बर्दियामा ७७ वटा वयस्क पाटेबाघ देखिएको थियो भने यसभन्दा पहिले वयस्क पाटेबाघ ५० वटा रहेका थिए ।
राष्ट्रिय बाघ गणना २०१८ को नतिजा प्रकाशन कार्यक्रममा नेपालभरि ८५० पाटेबाघ भएको अनुमान गरिएकामा ८३५ मात्र भेटिएको प्रमुख भण्डारीले बताए ।
त्यसैगरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आसपासका वन क्षेत्रमा बाघ १८ देखि ३० वटा अधिकतम वस्यक बाघ देखा परेको र औसतमा २१ फोटो पहिचानभएको सङ्ख्या क्यामरामा देखापरेकोे १७ बाघ देखापरेकोे बताए ।
उक्त समारोहमा राष्ट्रिय रुपमै बर्दियामा वस्यक बाघको सङ्ख्या बढेपछि पर्यटकका समेत निकुञ्जको अम्रेनी व्यारेक प्रवेशद्वारमा नतिजा सुन्न पर्यटकको घुइँचो लागेको थियो ।
कार्यक्रममा ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठले नेपालको सबैभन्दा बढी वस्यक पाटेबाघ सङ्ख्या वृद्धि बर्दियामा रहेकाले तिनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सन् २०१० मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न बाघ पाइने राष्ट्र प्रमुखहरुको सम्मेलनमा सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्यअनुरुप नेपालले बासस्थान, व्यवस्थापन, चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण, संस्थागत तथा नीतिगत संरचनामा सुधार, मानव र बाघबीच द्वन्द्व न्यूनीकरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो ।
२०७५, ७ आश्विन, 05:04:03 PM